တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ (၁၈) Day by Day (18) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ (၁၈) Day by Day (18)	5
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ (၁၈) Day by Day (18)
Posted by Ma Ma on Aug 16, 2015 in Literature/Books, My Dear Diary |5comments
မူလတန်းဖတ်စာမှာပါတဲ့ မပုကြွယ်နဲ့ ခရုငယ်မှာ….
ခရုငယ်လေးကို အတုယူပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ မပုကြွယ်လေးကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ပင်ကိုယ်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ အတုယူကြိုးစားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ
ဘေးလူက တွန်းထိုးပင့်တင်မှပဲ နိုးထတတ်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတတ်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီတစ်ပတ်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ အပိုင်း (၁၈) ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၀ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ စက်တင်ဘာတစ်လလုံးအတွက် အမြည်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ******************************************************************************************
လုပ်ငန်းသစ်ကို ပိုကောင်းမယ်ထင်ပြီး လုပ်ငန်းဟောင်းကို ခြေစုံကန်ပြီးတော့မှ
မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလို ဒုက္ခရောက်တာတွေ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးလို့ ဒီအတွေးအခေါ်ကို သဘောတူထောက်ခံပါတယ်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ သတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲ။
ဒီကာတွန်းကတော့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံဆနေတဲ့အဆင့်ကို ကျော်ပြီး အလုပ်ဖြစ်ချင်တဲ့ တွန်းအားပေးစကားပေ့ါ။
ခတ်တက်ပြင်တာနဲ့ ရွှေလောင်းရောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ကြားဖူးကြလားမသိဘူး။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခါနီး နေ့ရွှေ့ညရွှေ့နဲ့ ဆင်ခြေတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီး မလုပ်ဖြစ်ရင် ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားပါ။
ရှိတာနဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းတော့ ရှိဖို့လိုတာပေ့ါ။
တချိန်လုံးပြေးလွှားနေတဲ့၊ ရပ်နားခိုင်းလို့မရတဲ့ အချိန်ကို လူတွေဟာ အမှတ်တမဲ့နဲ့ နေမိကြတာများပါတယ်။
နောင်တ နောင်မှရလို့ ဆိုစကားရှိတယ် မဟုတ်လား။
စာမေးပွဲနီးမှ၊ သေခါနီးမှ ဆိုသလို အချိန်နည်းလာတဲ့အခါကျမှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အချိန်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိရင် နောက်ကျသွားပြီ။
တပြိုင်တည်းလုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ရင် စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုပဲ မြင်မိတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းရင် ကောင်းသလို လုပ်ငန်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုများတဲ့လောကကြီးထဲမှာ တပြိုင်တည်းလုပ်ပြီး သူများထက်ရှေ့ရောက်နေဖို့ လိုတာပေ့ါ။
ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို မကြည့်မမြင်ပဲ အကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတတ်ကြတာအတွက် သတိပေးချက်ပေ့ါ။
ဒီကာတွန်းနဲ့ စာကလည်း ရှင်းပါပေ့။
အိပ်မက်က မနိုးထရင် လက်တွေ့မှာ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလေ။
ကိုယ်ရဲ့ အကျင့်ဟာင်းကို ပယ်ဖို့၊ ကောင်းတဲ့အကျင့်သစ်နဲ့ လဲလှယ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယထာဘူတကျကျ (မညှာမတာ) ရှု့မြင်သုံးသပ်ဖို့ အရေးကြီးလိမ့်မယ်။
တခါတလေမှာ ဖြစ်နိုင်တာတွေအများကြီးကို စဉ်းစားပြီး စိတ်ပူနေမယ့်အစား
တကယ်ဖြစ်လာလို့ ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာကမှ သက်သာလိမ့်အုံးမယ်။
ထာဝရပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ လိုတာ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ပြောင်းလဲတာမှာ အကောင်းဖြစ်နိုင်သလို၊ အဆိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။
စာဖတ်ခြင်းဖြင့် သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကနေ အသိပညာဗဟုသုတတွေ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
သူတပါးအတွေ့အကြုံက သင်ယူခြင်းဖြင့် တကယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်း နည်းနိုင်တာပေ့ါ။
စာရှု့သူအပေါင်းလည်း ဘ၀မှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေကို ရှောင်ရှားကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့………
မြစပဲရိုး says: သများ ကို ရွာထဲ ရောက်အောင် ဆွဲခေါ် ခဲ့တာ မမ လဲ ရှေ့ဆုံး ကပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်အလှည့်ကျ မဆွဲဘဲ အတင်း ကို တွန်းတာ။
မတူ သောနည်း ဖြစ်အောင်ပါ။ lol;-))))
စက်တင်ဘာ (၁) မှာ တင် ပြောစရာတွေ့ပေါ့။
သများ ကတော့ ပုံးဟောင်းကို လွှင့်မပစ် သမျှ ပုံးသစ် ဝယ် တော့ မှာ မဟုတ်။
အဟောင်း ကိုဘဲ ကပ်သုံးနေတော့ မှာ။
ဒီတော့ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက် နည်း မှ မသုံး ရင် မဖြစ်သူမို့
ပုံးသစ် ရ မှ မပြောနဲ့ မရ ခင်မှာ တင် ပုံးဟောင်း ကို အရင် ပစ် ကို လွှင့်ပစ်ရတော့မှာ။
(နောက်တာပါ။ တကယ်တော့ နောက် တစ်ဖက် က ကြည့်ရင် မှန်ပါတယ်)
(၃) ရွာထဲ မယ် အချိန် စကား တော့ မကြားပါရစေနဲ့ မမ ရယ်။ (၄) Multi-tasking ဆိုတာ မိန်းမ တွေ က ပိုပြီး တော်တယ် မှတ်တာဘဲ။
ကျား တွေ မှာ အဲဒီ စွမ်းရည် နဲ တာများတယ်။
(၆) တစ်ချို့ အိမ်မက် များ က အပြင်မှာ မရနိုင်တော့ မှန်းသိလေတော့ အိပ်နေမှဘဲ …. :-))
(၇) ဟေ့ ချစ်မမ ဒီမှာ (၁) နဲ့ conflict ဖြစ်နေပြီဗျ။
(၈) ရွှေပြည်မှာတော့ စိုးရိမ်တာတွေက ဖြစ်ဖြစ်လာနေသလားဘဲ။
(၁၀) အဲဂလို သူများ ဆီက ရမဲ့ ဟာ တွေ ဘဲ သင်ယူဖို့ စောင့်နေတာ အားလုံး ဆို ခက်ရော။
အမှားကို ကြောက်လို့ စ လုပ်မဲ့ သူ /စပြောမဲ့သူ မရှိတော့ တာ ပိုပြီး ကြောက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလား။
ကာတွန်းလေးများ အတွက် ကျေးဇူးကြီးပါ။ နောက် နှစ်ပုဒ် ဘဲ ဗျို့။ မြန်မြန်လေး။ :-))))
Ma Ma says: ၄ရက်နေ့အတွက် မလတ်ရဲ့မှတ်ချက်ကို ထောက်ခံတယ်။
(အဲဒါ တူခြင်းရဲ့ အကျိုးတွေပေ့ါ။) ၁ရက်နေ့ကာတွန်းက Safety first သမားတွေအတွက်၊
၇ ရက်နေ့ကာတွန်းက Risk ယူနိုင်သူတွေအတွက်။ ၈ ရက်နေ့ကာတွန်းအတွက် မဖြစ်ခင် ကြိုပူရတာ ပိုဆိုးသလားလို့။ တကယ်ကြုံတွေ့လာရတော့လည်း ပေါင်မုန့်မရှိ ကိတ်မုန့်စားရုံပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သူများရဲ့အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူရတာပိုလွယ်တယ် ဆို တာကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: စက်တင်ဘာ ၁ ရက်က သများမွေးနေ့။
အဲဒီတော့ ပုံး သစ် ဝယ်ပြီးမှပဲ ပုံး ဟောင်း ပစ် တော့မယ်နော်။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည်ပြက္ခဒိန်လေး ရတော့မယ် ဟိဟိ